EyoMsintsi 02, 2016 by okwenyaniWW, Iimbono zizonke:
Umbuzo wokuqala ophakamayo kwindlela yomthengisi wekhaya kukuba ungathumela phi uluhlu lwendlu? Ngapha koko, zininzi iindawo apho ungathumela khona uluhlu lwezindlu. Amaphepha ephephandaba, umzekelo. Kuyimfuneko ukunika udweliso lwendlu kuphela kwifomathi yendawo, kodwa ukuba indlu ikwimetropolis, uya kuthi ke ufune ukungenisa uluhlu lwendlu kupapasho olukhulu. Emva kwayo yonke loo nto, abantu abaninzi banomdla wokuhamba kumaphondo baye kwidolophu ephakathi.
Okwesibini akukho ndawo iphantsi ethandwayo yokubekwa koluhlu lwezindlu yi-Intanethi. Kwaneedolophu ezincinci zinezibonda zasedolophini ezineebhodi zokuhlelwa. Abantu abaninzi bajonga kubo ngeenjongo ezahlukeneyo, kubandakanya neenjongo zokukhangela izindlu. Akukho mfuneko yokuba ubeke uluhlu lwendlu kwiwebhusayithi yesixeko kuphela, kukho iibhodi zemimandla, kwaye akukho monakalo uya kubakopa kwi-classifieds ye-intanethi efana ne-realtyWW.
Uncedo olungathandabuzekiyo lwee-classifieds kwiiwebhusayithi kukuba kunokwenzeka ukubeka uluhlu olungenamkhawulo wendlu uluhlu olunemifanekiso, ngokuqinisekileyo luya kutsala abathengi. Njengoko intetho eqhelekileyo iqhubeka kungcono ukubona kanye kunokuba uve amaxesha alikhulu. Ukuthelekisa, njengempendulo kuludwe lwendlu ezixhonywe ezipalini, abantu bayabiza, kodwa kunqabile ukuba babe ngabathengi. Xa umntu ebona ngamehlo akhe “imveliso” emifanekisweni, uphuhlisa umfanekiso ochanekileyo wento aze abize xa enomdla wokwenene. Kodwa ndifuna ukuthetha ukuba ukuthengisa ngokukhawuleza kwepropathi, kuya kufuneka sisebenzise ubuninzi beendlela ezahlukeneyo zentengiso.
Kwakhona, ukufumana abathengi abanokubakho, kuya kufuneka uphonononge indawo yokuhlala kwaye uqaphele abo bantu banomdla wokwenyani kwisithembiso sakho. Umzekelo, ukuba indlu ikufuphi neziko elithile lemfundo, eyunivesithi, iyavakala indawo ukuba ibeke uluhlu lwendlu ngendlela eya kuthi abafundi bayo bayibone. Ukuba isindululo senzelwe abantu abatyebileyo nabatyebileyo, faka uluhlu lwendlu kwiibhodi zeehypermarket, kubhetele xa ukufutshane.
Ngoku siqondile ukuba singaposa kuluphi uluhlu lwendlu.
Ungayenza njani ngokuchanekileyo kwaye inomdla?
Kwixesha elizayo impumelelo yesivumelwano iya kuxhomekeka kwindlela uhonjiso lwendlu luhonjiswe ngayo. Nantsi imigaqo esisiseko yokwenza uluhlu lwendlu.
Xa usenza uluhlu lwezindlu, qiniseka ukuba ubandakanya indawo leyo ibekwe kuyo izindlu. Inombolo yendlu, inani lilonke levenkile yokugcina indlu, ngaba yiphaneli okanye indlu yezitena. Zonke ezi nkcukacha zibalulekile kubathengi bakho bexesha elizayo, kwaye baya kunika umbono obanzi wesicelo sakho.
Emva kokuba ucacisile iimpawu eziqhelekileyo zokuhlala, kuya kuya kwinkcazo yendlu ethe kratya. Xelela umthengi wexesha elizayo malunga nokulungiswa okwenziweyo endlwini. Kucetyiswa ukuxelela ngakumbi ngayo, njengoko igama eliqhelekileyo "ukulungiswa ngokulungileyo", njl. Njl. Linokunika umbono ophathekayo ngezindlu. Umgangatho wokulungiswa ungcono ukuchaza ngezinto zekhonkrithi, ezinje ngeefestile ze-UPVC, nokuba ngaba kukho ukujonga ukukhanya kwe-balcony, ubukho bokubala kwindawo ekuhanjiswa kuyo amanzi, ukuba kuthengisiwe ngefanitshala, yeyiphi ifenitshala. Ngokubanzi, oku kufanele kuchazwe ngokucacileyo. Ngokukhethekileyo kunye nezinto ezakhayo.
Kubantu abaninzi, ngumbuzo ochulumancisayo "indawo yokuhlala." Abamelwane, xelela amagama ambalwa malunga nabo, intendelezo - zibandakanye nesi sihloko kuludwe lwakho lwendlu, iziseko zophuhliso ezikufutshane nekhaya (enkulisa, izikolo, iivenkile, indawo yokumisa ibhasi). Konke oku kunceda ukutsala umdla womthengi.
Xa ubeka uluhlu lwendlu kwimithombo ye-intanethi, akukho mfuneko yokonga indawo - bhala inkcazo ngenkcazo yezindlu ngokugqibeleleyo, amagama afinyeziweyo aya kunika isiphumo esichaseneyo neso sisifunayo. Xa kuziwa ephepheni, apho ubukhulu boluhlu lwendlu lubalulekile, kuya kufuneka uchaze eyona nto ibaluleke kakhulu - eyona nto iphambili kwizindlu, ngaphandle kokuchaphazela iinkcukacha.
Kufuneka sixelele kuphela malunga necala elifanelekileyo lezindlu. Nangona kunjalo, umntu kufuneka alumke ukuba angazigqithisi okanye azenzele. Sikucebisa ukuba uthethe ngezibonelelo zendlu, ukhankanya ukudlulisa ukusilela kwayo, okanye uthi cwaka, kodwa akufuneki uzibalele.
Isivakalisi sokuqala soluhlu lwendlu luhlobo lwentloko engabambisa umthengi, okanye ayicinezele kude. Yenza isivakalisi sokuqala ngocoselelo olukhulu, utsala umdla womfundi, mhlawumbi nomthengi.
Sukukhankanya igama elithi "ngokungxamisekileyo" kuluhlu lwendlu kuba eli gama linxulunyaniswa nomgangatho ombi, okanye i-hoax. Xa uchaza ukuba uzimisele ukuvumelana, abanye banokucinga ukuba uqala ukuthengisa ixabiso. Ke ngoko, kuya kufuneka uphephe la magama mabini aqhelekileyo.
Qiniseka ukuba ubonakalisa, ukuba ukhona, ukuba ukulungele ukuqhuba isivumelwano. Ungakwenza oku ngokuchaza ukuba onke amaxwebhu asezandleni, ungumnini ofanelekileyo, njl njl.
Impikiswano eninzi iqhubeka malunga Nokuba ngaba ikho imfuneko yokuchaza ixabiso kuluhlu lwendlu. Masicinge ngokuqiqa. Ukuba ixabiso alichazwanga, loo mntu uya kudideka. Ngokukufowunela kwaye ufumanise ukuba yeyiphi amaxabiso ayamkeli kuye, kuya kufuneka ngandlel 'ithile akuphume kule meko. Ukongeza kuko konke oku, uya kuza nemfumba yeefowuni ezivela kubantu abangabathengi abanokubakho. Ke, kuya kufuneka uchaze ixabiso kuludwe lwendlu.
5 ngenxa ye 1 iivoti
Ukuhanjiswa kwemenyu yendlu
Ukuze uthengise indlu ngokukhawuleza kwaye ngexabiso eliphezulu, ukuba ungaweli ngenxa yebhegi yabakhohlisi, kuya kufuneka wenze uluhlu olunobuchule bendlu. Ngapha koko, zininzi iindawo apho ungathumela khona uluhlu lwezindlu.
okwenyaniWW Septemba 2, 2016
Olu ngeno yafakwa kwi Intengiso yeNtengiso yePropathi noqhotyosho Indlu yeeNtengiso yasimahla, Iintengiso zeNdlu yasimahla, Intengiso yasimahla yasekhaya, Intengiso yasimahla yasekhaya kwi-Intanethi, Uluhlu lweNdlu yasimahla, Uluhlu lwasimahla lweNdlu luThengiso, Uluhlu lwasimahla lweZindlu, Intengiso yeNdlu, Uluhlu lweNdlu, Uluhlu lweendlu zeRhafu, Uluhlu lweNdlu luyathengiswa, Uluhlu lweNdlu saSimahla, Uluhlu lweNdlu kwi-Intanethi, Uluhlu lweNdlu yeHlabathi, Uluhlu lweArhente yeZindlu zeHlabathi, Uluhlu lweeNdawo zeZindlu amaZwe simahla, Uludwe, Indlu yeeNdlu, Uluhlu lwentengiso yearhente, Intengiso yeNdlu ye-Intanethi, Uluhlu lweNdlu ye-Intanethi, Uluhlu lweNdawo yeNtengiso ye-Intanethi, Thumela Uluhlu lweeNdawo zokuThengisa, Uluhlu lwePropati, Uluhlu lweArhente yeArhente yeNtengiso, Uluhlu lweearhente zentengiso, Uluhlu lweNkampani yeZakhiwo, Uluhlu lwezezindlu, Uluhlu lweearhente zentengiso, Uluhlu lweeNtengiso zeNtengiso, Uluhlu lweeNdawo zeZindlu simahla, Uluhlu lweearhente zeZakhiwo kwi-Intanethi, Uluhlu lweeNdawo zeNdawo zokuThengisa izindlu, Uluhlu lwentengiso, Apho Ungathumela Uluhlu lweeNdawo zeeNdawo zisimahla. Bookmark le Permalink.
Oktobha 4, 2016 Uluhlu lweeNdlu eziGqibeleleyo zoLuntu kunye neNkonzo yoThengi engahlawulelwayo e-Irvine, CA From fashion design to semiconductors, Irvine is a city of details. Details shine in Irvine’s clever city planning, world class universities, wildly popular boutiques and beautiful neighborhoods. And, as every great company knows, attention to detail includes customer service. In any industry and in any market, customer service is not something any organization should overlook. That’s especially true in real estate. Every realtor selling luxury homes in Irvine knows that […] exhonyiweyo Ukuthengisa izindlu nomhlaba
Oktobha 29, 2018 Ukuhamba kweNdlu usuka e-UK uye eIndiya? Nantsi into omele uyazi kwangaphambili Ke, ngaba sele ugqibe kwelokuba umamele entliziyweni yakho kwaye uye e-India usuka e-UK? Isigqibo sokuba ikamva lakho liya kuba nebhongo ngokuba i-India lilizwe elinobutyebi obahlukeneyo ngokubulela kwisinye kwisithandathu sabemi behlabathi lonke elixhasayo. Ukusuka kumhlaba oqaqambileyo wokutya okubonakalayo, ukusukela kwizithethe ezityebileyo ukuya kubantu abaneentambo, ukusuka kwizithethe ezinomtsalane ukuya kwinkcubeko edibeneyo, iIndiya lilizwe elimangalisayo kuzo zonke iindlela. Ukuhlala e-UK kunokuba kushiye amanqaku athile anaphakade ku- […] exhonyiweyo Ukuqhubeka